Oromoon waan hunda dursa Tokko ta’ee deemuu qaba.
Suura Oromoo hin ibsiine
Dubbii fi gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Waan isaan jechaa jiranii fi waan ummatni jechaa jiru wal naaf hin fakkaanne. Waan dubbii isaa gara ofii barbaadanitti maqsaa jiran natti fakkaata. Gargaarsi gaarii utuu ta'ee jiru, gargaarsa fakkeessanii kan of harkaa qabnu qaama nu harkaa gatu simachuun gowwummaa natti fakkaata. Dubbin isaa akkuma Isaanuu mammaakan sana "wusxa wayiraa" ta'uun isaa shakkii hin qabu.
Jechumti isaan maxxanfatan kunuu madaa durii tuttuqee nama kuukkii kaasa. Ani kanan jedhu yoo deggersaaf ka'an ta'e, maaliif waan oromoon jedhu ykn gaafataa jiru akka jirutti fudhatanii hin maxxanfane? Gargaarsi Oromoon kallattiin har'a barbaadu ifaa fi ifa dha. Dhalootni biroo kan Oromoo hintaane, guwaazii fi guzgaazii isaanii xaxatanii fi fudhatanii Oromiyaatti galanii jireenya mi'aawaa dhandhamatanii achitti walhoran hundinuu qabsoo ammas ta'u kana booda adeemsifamu hundaatti ummata Oromoo wajjin qaamaanis, qabeenyaanis ta'u yaadaan akka bira dhaabbatan. Walirraa horreerra wajjin nyaanneerra jechuun qofti nama hin firoomsu. Hammas ta'u tolaa wajjin hirmaachuun dirqama ta'a.
Akkasumas Sabaa fi Sablammiin ollaa jiran bifa armaan dura lafa kaa'een Oromoo bira akka dhaabatan barbaachisa. Garuu amma karumma ummata Oromoo biyya alaa jiraatan kanaas yammuun ilaalu, jara warra habashaatti sababa tokkummaan Ethiopia fayyifna jedhuun akka walitti hirkachuu yaaluu tokkotu mul'ata. Yoo dubbachuuf kaanes afaan keenya harka isaanii lamaan cuqqaluuf nutti fiigu. Dubbi isaa naaf hingalle. Usaa afuura raafuu hin baafatinaa jechaa jiru. Oromoon yaroo har'aa kana sabaaf sablammii irraa rakkoo hin qabu. Kaayyoon isaa Abbaa biyyuumaa isaa kabachiisuuf malee nama tuquuf natti hin fakkaatu. Kan hubachuu qabnu kan tokkoo itti rakkate tokko abbaa warraa itti ta'uu yaaluun kun naqa tokko qofa Oromoo waan qunname natti hin fakkaatu. Isuma duriitu bifa jijjiirratee as ba'aa jira.
Fincilli Diddaa Gabrummaa kanuma Oromoo fi kan Oromoo qofa. Kan haati jalaa duutee fi kan gabaa ademte walqixa hin boo'uu jedha oromoon yaroo mammaaku. Isaan angoo kaleessa dhabaniif boo'uu, Oromoon biyya abbaa isaa irratti mirga isaa sarbameetu boo'a. Wal gargaarsi barbaachisaa ta'uu mala. Garuu akka qaba. Akkuma isaanumtuu kan isaanii tottolfatanii kan keenyatti afaan dhadhaa dibatanii as sissiqan kanatti ofiis of qopheessanii kan ofiitiin sodaa tokko malee dhaadachaa fi kaayyoo ofii ifaaf ifatti beeksifachaa jechuu dha. Utuu hin alanfatiin liqimsuun booda hudhamuu akkuma fidu dubbiin ta'uu dura alanfachuun bareedaa dha. Tokko jalaa baqachuutti isa caalutti dirmuunis numa jira. Gargaarsa kan godhuun malummoo ummata yaada qajeelaa fi quuqama saba Oromoo kanaaf qabaniiti akkasumas madaan Oromoo kan itti dhaga'amaa jiruuti. Waan Arga jiru Dhaabilee Habasha, Haawwasi Habasha fi Namii dhunfa ilee Oromoo gargaruuf qoophi hin qaban. Fakkenyaf Dhaabileen Habasha Yeeroo kan Fininnee gutuan hirira ba’aan hara maliif gadii hin bane?, ykn Haawwasi isaan Oromoo dukka akka hirira ba’uu maliif waamicha hin gooneef?, Baratoon Habasha University hunda keessa jiran yeero baratoon Oromoo reebaman, Ajeefaman, Hidhaman, mana barumsa irra ari’aman maliif kutaa keessati hafaan baratuu? Barachuu qoofa miti Haromayaa fi Amboti Walgaii Baratoota goodhamee irrati jarii kun baratoota utuu hin tanee terrortstoota (Shororkeesitoota) jeedhan yaada lachuun gudaa nama gadisisa ijoolee dhiigi ishee dhangala’aa jiruun shorokesistoota jeechun yakka.
Hanga yoonati Habashon lafa Oromoo irra jiratan, Dhaabilee Habasha Finfiinee jiran fi biyya ala jiran Oromoo dhumma waan jiruuf Oromoo gargaree waliin hirirun siirana TPLF buqisuu qabna jeedhan ibsa basuuf feedhi hin qaban. Warii akka Dr. Masay Kebeda amoo xifumaa Qabsoo Oromoo gegesa jiruu fi Ijoolee Oromoo TPLF falmachuuf ajeefama jirtuu kana amahari akka hin degree bareesun 15 12 2015 “Oromo Uprising: Danger and Opportunity” nu dubisisani jiru. Erga BeekanAmharati nami jeedhamuu Oromoo hin gargariina jeedhe yeeroo rakkoo kana keessa labsii basa ta’ee amaharii beekumasa akka isaa hin qabneef baratooni university ijoolee Oromoo gargarani tumsa nuuf ta’uu ni danda’uu kan jeedhu amanta hin qabuu.
Garboonfata yoomi ilee gornboon isaa akka bilisooman goodhee argamee dhagamee hin beekuu, Nafixanya Haransi ta’ee nafxanyaa moofan abba biyyuma Oromoo hin barbadan. Neo-Nafxanyan amoo abbootii isaan caalaa jibinisa gudaa Oromoof akka qaban dagachuu hin qabnuu. Akka ama dhaabilee Oromoo waliiif galuu didani adeema jiran kanatii nami kan nuti dhufuu utuu hin tanee horman liqinfamuuf deeman. Qabsoon Baratoon Oromoo fi Uumati Oromoo itti dhigaa jiru kana hormii dhunfachuuf yaalii yoo goodhee amoo akka Ruwanda wal baleesee ta’aa.
Rakkon Oromoo ini guddan degersa uumata birra dhabuu fi degersa hawwassa adunya dhabuu qoofa miti, rakkoo Oromoo ini gudan dhaabileen Oromoo tokkuma dhabuu isaanti. Seenan Oromoo dadhabina keenya waan galmesee nuuf ka’ee waan kitaaba irrati bareefamee keessa akka Haadha fi akka Obboleti Oromoo tokkoti gorsan Dhaabilee Oromoo fi Ummata Oromoof ani qabuu isiinf dhamuu barbada. Inisii akkasii
1. Mootiini Oromoo Warqituu fi Mastaawot angoo irrati waan wal dhabaniif Tewodros caaraa kanati fayadamee angoo qabatee jari keenya lachuu ni mo’ataman.
2. Utuu Gobana Dacee Mootoota Oromoo hunda, Kafa, Gimira, Kuloo fi Walayita hin cabsiine ta’ee, Oromoo firootan isaa waliin dhabtee, Minilik caaraa sun argatee Oromoo uumata hangasi balatuu xifufam hin dhunfatuu ture;
3. Gaafa Minilik du’uuf deemuu utuu Abban mala (Habte Georgisif) Liji iyyasun wal dhabuu batan gara tokko goran ta’ee caaraan gudaan kan Oromoo ture Oromoon wal kufisee Tefarii Mekonin wagaa 40 Oromoo bita ture.
4. Gaafa Teferi Mekonin (Haile Silasen) Kufuu Humana waraan fi meesha kan qabatan Oromoo turan garuu Humna waraana keessa warii jiran, akka J/Tefarii Banti, K/Dabala Dinsa, J/Damse Bulto fi J/Tefaye G/ Kidan kkf dandeeti siyyasa wara qaban akka Haile Fida, Baroo Tumsa, Sanayi Like, Abiyu Galata kkf utuu wal barbadani mari’aachuu utuu qaban dhaabilee Habasha keessati faca’aan ijaramuun Oromoo Harka abba Hiree Dargiti kufisan.
5. Gaafa TPLF angoo qabatuusi Oromoo caaraa gudaa qaba ture, erga galuun isaa hin olee adeemsa siyyasaa isaani jijirani gara balachuun OPDO fi dhaabilee Oromoo hunda waliin tokkumaa uumachuun utuu hojeetan ta’ee TPLF filaannoo qoofan angoo irra buusuu danda’uu turran. Humana warana ilee waan qabaanf dhaabilee mormitoota hunda caalaa ABO bakka gudaa ga’uu danda’a ture. Garuu caaraa gudda fi diree balaa qabuu kana siirti itti hin fayadamnee. OPDO xiiqeesuuf tufachuu, Nama isaati deemuu siirti itti fayadamuu dadhabuu keesuuma warana Dargii itti fayadamuu dhabuu, Feedhii beektoota Oromoo fi Gaafii Uumata Oromoo keesumeesuu dadhabee Oromoo dhaabba dura bu’ee adeemuu isaa arga ture.
6. Oromoo ama ilee Dogogra 5 kana olti caqasaman irra deebiyuuf deema. Haawwassi Oromoo Biyya keessa Baratooni Oromoo hundi tokko ta’aan jiru, Ijoolee Oromoo wayee Laga fi Amantan wal qooduu injifatee tokkuman qabsoo gegesa jirti. Dhaabileen Oromoo ala jiran amoo amayuu bakka 20 ta’aanti wal firoonfachuu dhisan, kayyoo Oromoo dhisaan diinati ruruqachuu, fiira dhisaan diina firoonfachuuf deema jiruu kun amoo balaf nu saxilee seenan akka nu gaafatu amuma iti yaaduu qabu.
Anis akka Haadhati fi Obbooletiti waanin isaan gorsuu feedhu Oromoo Abba biyya goochuuf tokko ta’uu qabna, erga abba biyya tanee booda wayee dhaabba, wayee Angoo fi feedhii dhunfa bilisummaa booda hundi iyuu kan furmata argatuu dha, amaf garuu waan hunda dura feedhii uumata Oromoo bilisummaaf dursa lachuu qabna. Oromoon yoo tokko ta’ee humna cimaa ta’ee diini fi firi keenya kabaja nu keene nu dukka hirira, utuu nu tokko tanee humna hin ta’iin garuu yoo kadhanee ilee nami nu degeruu fi nu fironfatuu hin jiruu.
Kanaafuu akka kooti, Habasha walqixuumma dhala namati hin amanan firnfachuuf kayyoo Oromoon itti dhiga jiru salphisan ilaaluu irra, warii kayyoo tokkof mana ba’eeye dura dhiiga Oromoo dhangala’aa jiru kana ilaalee wal dukka hiriruu qaba. Quuqama garaakoon barreesse malee saba biroo fi Oromoo walitti naquufan barreesse miti. Kana na hubadha!!
Oromoo Muca xiiqoo kasse hanga Jartii wagga 90 falami abbaa biyuumaa irrati tokko ta'ee hirirun isaa na boonese jira, Oromoon hundi Qabsoo kana akka tumsuu qabuu waamicha koon dabarsafi, Oromoo ajjeecha Wayyane irra haftan gara wagga hara bara 2016 dabartanini isiin jeedha bariii kun baraa Mo’ichaa fi bara Blisummaa nuuf hata'uun jeedha.
Oromoon hundi Qeerroo birra dhabachuu qaba !!
Bara 2016 bara Bilisummaa nuf hata’uu !!!
Na of kalchaa.